Aya mapoka matatu eMangariro ndeaya avo pamagumo emanvantara vaiva mu Capricorn, sagittary, scorpio.
Vol. 5 AUGUST, 1907. Nha. 5
PERSONALITY inobva mumidzi miviri yakadzika, pa, kuburikidza, uye sonus, inzwi. Persona yakanga iri mask kana chikwata icho muimbi wacho aipfeka uye aitaura kuburikidza. Saka tinowana shoko rehupenyu. Unhu hwevanhu, hunovakwa uye hunoshandiswa nemunhu oga, pfungwa yakakwirira, manas, kuti ave nehukama nenyika, haisi yezvino. Mhedzisiro yaro iri mumatangiro enhoroondo yenyika.
Izwi hunhu hunoshandiswa zvisingazivikanwi nehuruzhinji uye kunyange nevanosophist vanofanirwa kuziva mutsauko, sezvavanoita musiyano pakati pehupenyu nehumwe munhu. Unhu hausi chinhu chimwe chete, chiri nyore kana chimwe chinhu; iyo inoumbwa yezvinhu zvakawanda, pfungwa uye mazano, ayo ose pamwe chete anoonekwa seumwe. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvakatora makore kuti zvivepo. Asi kunyange zvazvo unhu hwakaumbwa nezvikamu zvakawanda, zvisikwa zvaro zvinokonzerwa zvikuru kune zvinyorwa zviviri, pfungwa dzisina kufema, kana kufema (♋︎), uye pfungwa yekuzviziva, kana kuti munhu oga (♑︎).
Iko nguva dzose zvakanaka kutarisa chidiacac kana uchibata neshoko chero ripi zvaro rinosangana nemunhu, nokuti zerodhi ndiyo nzira iyo munhu anovakwa nayo. Apo chidiacac yaimbokoshesa munhu anokwanisa kudzidza chero chikamu chero chipi zvacho kana chimiro chomunhu kana kuti nyika kuburikidza nechiratidzo chaicho. Zvose zviratidzo muhafu yepasi yezodhiac zvine chokuita nekugadzirwa kweunhu, asi zviratidzo zvekenza (♋︎) uye capricorn (♑︎) ndezvisikwa zvavo chaiwo. Unhu huse huri hanya-huno hunobva kune kenza (♋︎); izvo zvose zvinonzwisisa hunyoro hunobva kune capricorn (♑︎). Ngatitsanangurirei muchidimbu nhoroondo yehupenyu kuburikidza nekodhiac.
Sezvakataurwa munhoroondo dzekare pamusoro pezvenyika, nyika yedu inomiririra dhichina kana nguva huru mukushanduka. Munechina yechina makore manomwe makuru kana zvikamu zvevanhu ndezvekukura. Zvikamu zvina zvezvikwata izvi (♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎) zvakapfuura nepakati penguva yavo, uye zvose asi zvakasara zvechina zvakanyangarika. Ichishanu yezukuru-nhangemutange (♏︎) ikozvino irikudziridzwa kuburikidza ne-sub-divisions munyika yose. Isu tiri mumutsara wechishanu (♏︎) wechishanu mumusasa (uyewo ♏︎). Kugadzirira uye kutanga kwechitanhatu pasi-nharo iri kuitika muAmerica. Chokutanga chakakunda midzi-kenza (♋︎).
Mufananidzo 29 unodzokororwa kubva pane imwe nyaya yekare kuitira kuti kukurudzirwa kwemadzinza kungave kunzwisiswa zvakajeka uye nzvimbo yavo mune imwe nzira yezdiac inogona kuonekwa. Neizvi zvinogona kunge zvakasvikwa pedigree yemunhu, uye kunyanya kubatana kwayo uye uye ukama nekenza zviratidzo (♋︎) uye capricorn (♑︎). Mufananidzo 29 rinoratidza rutsva rwechina rune midzi nomwe midzi. Chimwe chezvinyorwa zviduku zvinomiririra mudzimu, uye chimwe nechimwe chezvinhu izvi chinoratidzwa kuti chine zvinyorwa kana kuti mapoka pasi pemutsara wakanyanyisa.
Rudzi rwekutanga rutsva runoratidzwa nekenza yechiratidzo (♋︎). Zvisikwa zverudzi irworwo zvakange zvakafema. Vakanga vasina mhando dzakadaro sevanhu vedu vemazuva ano. Yaiva mararita akafanana nemhepo. Vakanga vari vemarudzi manomwe, makirasi, mairairo kana mahedheni ekufema, marudzi ose, kirasi kana kurongeka, kuva chimiro chakanaka chemazuva anotevera anoenderana midzi-nhangemutange, uye yezvikamu zvakasiyana-siyana zvezera iroro. Uyu muzuro wokutanga hauna kufa sezvakaita marudzi akatevera; chakanga chiri uye iyo ndiyo nhangemutange yakakodzera yevaya vaitevera.
Pakuvambwa kwedu, wechina, kumativi ose, kenza (♋︎) hurumende yekenza yekutanga (♋︎) rutsva yakateverwa neyi (♌︎) hurumende iyo yaiva yechipiri chechikamu chechikamu ichocho chokutanga, uye nokudaro pamwe chete nemamwe mazita ekuremekedza anomiririrwa nemiratidzo yavo virgo (♍︎) uye libra (♎︎), scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), uye capricorn (♑︎). Apo iyo capricorn (♑︎) yehurumende yekufema (♋︎) yerudzi rwainge yasvika, iyo yakaratidza kupera kwemazuva avo, capricorn (♑︎) kuva kukwana kwakakwana kune iyo yose nhangemutange, uye kubatsirana nekenza ( ♋︎) hurumende yedzinza rokutanga, ivo vari vaviri vari mundiro imwe chete.
Apo hutungamiri hwechina, libra (♎︎), yemhepo yekufema nhangemutange (♋︎) yaive yakasimba, vakafema ndokubva vatora kubva kwavari pachavo mikuru mikuru-nhangemutange, mararamiro eupenyu (♌︎), ayo akapfuura nemanomwe ayo zvikamu kana zvidimbu sezvinoratidzwa nemagariro ekufema (♋︎) marudzi. Asi apo kufema (♋︎) kwaiva chimiro chekufema kose (♋︎) marudzi, chimiro chechipiri, hupenyu (♌︎) rutsva, rwakatungamirirwa hupenyu hwose (♌︎) rudzi. Apo rutsva rwechipiri kana hupenyu (♌︎) rwakasvikawo kune chiratidzo chekupedzisira kana degree (♑︎) mutambo, zvakasiyana neboka rekutanga, rakanyangarika zvachose. Apo iyo, mararamiro ehupenyu, yakanga yasvika pariri, yakatanga kubudisa rudzi rwechitatu rwakanga rwuri maitiro (♍︎) rudzi, uye sezvo maitiro echimiro chemarudzi akaiswa nehupenyu hwehupenyu, hupenyu (♌︎) rudziro rwakanga rwakabatwa navo. Maviri maviri ekutanga mahedheni emufomu (♍︎) marudzi akanga ari astral, sezvakanga zvakaita chikamu chokutanga chechitatu (♍︎) mutsara. Asi muchikamu chekupedzisira chechikamu chechitatu chemutsara vakava vakasimba uye pakupedzisira muviri.
Rudzi rwechina, kurara (♎︎) rudzi, rwakatanga pakati pechitatu kana fomu (♍︎) rudzi. Rudzi rwechishanu rwedu, chido (♏︎) rudzi, rwakatanga pakati pechina (♎︎) rudzi uye rwakasikwa nekubatana kwevakadzi. Iye zvino, kuona kuwirirana pakati pechina nechechishanu madzinza nemusasa wokutanga wakanaka, uye patinomira mukugadzirisa.
Sezvo nhangemutange yekutanga yakafemerwa yechipiri, mararamiro ehupenyu (♌︎), kuvapo, saka mararamiro ehupenyu achitevera muenzaniso wakaisa, ebudisa rudzi rwechitatu rwakagadzirwa maitiro. Iyi mafomu aiva pakutanga astral, asi zvishoma nezvishoma vakava muviri sezvavakaswedera kana kusvika kuchikoro chavo. Maitiro avo akanga ari izvo zvatinoshevedza vanhu, asi kwete kusvikira rudzi rwechina rwakatanga, rwakatanga kuburikidza nekuberekwa. Rudzi rwechina rwakatanga pakati pekumhanya kwechitatu, uye shanho redu rechishanu rakaberekerwa pakati pechikwata chechina miviri yedu inogadzirwa nenzira imwecheteyo.
Nenguva idzi, mweya yekufema yemhepo inotarisa yakatarisa uye yakabatsira mukurudziro imwe neimwe yerudzi rwayo maererano nehutungamiri hwayo hwakanaka uye maererano nechechi yehurumende. Mhepo yekufema nhangemutange haina kurarama panyika yakaoma semitumbi yedu inoita; ivo vaigara mune imwe nzvimbo iyo yakaita uye inoita ichikomberedza pasi. Rudzi rwoupenyu rwakanga rwuri mukati memhepo yekufema, asi rakapoteredza pasi. Sezvo mararamiro ehupenyu akavakwa uye kuisa miviri, iyo virgo (♍︎) hukuru hwemhepo yekufema (♋︎) dzinza rakarongerwa maitiro kubva munharaunda yaro umo mararamiro ehupenyu akapera kana kuti akabatanidzwa. Maitiro eAstral saka akarongedzwa aigara mune imwe nzvimbo mukati mehupenyu hwehupenyu, izvo zvatinogona kutarisana nemhepo yepasi. Sezvo ivo vakave vanyoro uye vakasimbiswa, vairarama, sezvatiri, panyika yakasimba. Mhepo yekufema semunhu wose inogona kutaurwa kuti ndiyo madzitateguru evanhu, anozivikanwa muChinyadzo Chakavanzika se "bharishad pitris." Asi sezvo pane makirasi mazhinji kana mazera e "madzitateguru" tichadana kirasi iyo yakasimudzira vasina maturo inoumba virgo kirasi (♍︎) kana hurumende yebharishad pitris. Iyo miviri inobata hupenyu sezvinoita zvinomera uye ichizvibereka pachavo kuburikidza nekupfuura nemametororphosis yakafanana neyee butterfly. Asi maitiro akagadzirwa, zvishoma nezvishoma akagadzirwa nhengo dzepabonde. Pakutanga musikana sevirgo (♍︎), uye ipapo, sekuda kwekuda kuonekwa, nhengo yevarume yakagadzirwa mumhando iyo. Zvadaro zvakagadzirwa nekubatana kwevakadzi. Kwekanguva izvi zvakagadzirirwa maererano nemwaka kana nguva, uye zvinotungamirirwa nehupenyu hwakanaka hwemhepo yekufema.
Kusvikira panguva iyi, nyama yevanhu yakanga isina pfungwa yega. Mafomu aiva vanhu muhumiro, asi mune dzimwe nzvimbo dzose vakange vari mhuka. Vakatungamirirwa nezvido zvavo zvaive mhuka chaiyo; asi, sezvakaitwa nemhuka dzakaderera, chido chavo chaiva chemutsa wavo uye chakanga chichitungamirirwa nemitambo yemwaka. Vaiva mhuka dzechisikigo zvichiita maererano nemaitiro avo uye pasina kunyadziswa. Vakanga vasina tsika yekuziva nokuti vakanga vasingazivi nzira yekuita zvimwe kunze kwekukurudzira zvido zvavo. Uyu waiva mamiriro evanhu chaiwo sekutsanangurwa muBhaibheri seJindu reEdheni. Kusvikira panguva ino nyama-mhuka yevanhu yaiva nemitemo yose iyo vanhu vedu vemazuva ano vane, kunze kwepfungwa.
Pakutanga nhangemutange yekutanga yakafemerwa kurudzi rwechipiri kana yehupenyu, uye rudzi rweupenyu rwunobudisa rudzi rwechitatu rwakatora mafomu. Zvadaro maitiro aya, kubatanidza uye kufambisa mararamiro ehupenyu, akavaka miviri yenyama yakakomberedza ivo pachavo. Ipapo chido chimuka uye ushingaira mukati memafomu; izvo zvakanga zviri kunze iko zvino zvinobva mukati. Kufema kunotungamirira chido, chido chinopa hupenyu kuhupenyu, hupenyu hunotora maitiro, uye hunoita hunoita kuti chigadziko chiite. Chimwe nechimwe chezviviri izvi kana mazano ndiwo maitiro akajeka emhando dzakanaka dzemhepo inofema, imwe neimwe maererano nerudzi rwayo.